खुसीको खबर: न्युजिल्याण्डले जित्यो कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ ! «
खुसीको खबर: न्युजिल्याण्डले जित्यो कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ !
Published : 27 April, 2020 3:50 pm
न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिण्डा अर्डर्नले आफ्नो मुलुकमा परीक्षण हुन बाँकी कुनै पनि संक्रमित नभएको दाबी गरेकी छिन् । साथै उनले न्युजिल्याण्डले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ जितेको जिकिर गरेकी छिन् ।
सोमबार न्युजिल्याण्डमा एक नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । न्युजिल्याण्डमा अहिलेसम्म एक हजार पाँच सयभन्दा कम संक्रमित छन् । यीमध्ये ८० प्रतिशत निको भइसकेका छन् । अहिलेसम्म यो मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारण १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । स्रोत : बीबीसी